Abantwana abanikiweyo kwi-nursergart kunye nesikolo
Abantwana abanikiweyo abahlanganiswanga rhoqo, okwenza kube yunithi ehlukeneyo yoluntu. Kubonakala ngathi kufuneka babe luvuyo kubo bonke abakujikelezile ngenxa yamakhono abo aphezulu. Nangona kunjalo, ukuphuhliswa kwabantwana abanesiphiwo esikolweni nakwesikolo maxa wambi kudibana neengxaki ezahlukahlukeneyo ezinxulumene nengqondo yabo.
Abantwana abanikiweyo kwi-kindergarten kunye nesikolo bayindawo ehlukeneyo yoluntu. Ngokuqhelekileyo ababaninzi (omnye okanye ababini ngabantwana kwiklasi okanye kwiqela) ngenxa yoko bangakwazi ukukhutshwa. Imfihlelo yalesi simo sengqondo yabantu bonke abantu. Nangona kunjalo, sikulungele ukujonga indlela abaziphatha ngayo kunye nesimo sengqondo ngabanye ebantwaneni nasezikolweni.
Abantwana abanikiweyo kwi-nursergarten
I-Kindergarten yimbutho yokuqala yoluntu ebonakala kumendo wobomi bomntwana. Kuyo kufuneka azi zonke iinkcukacha zobunxibelelwano nabantu abakujikelezile. Nangona kunjalo, abantwana abanesakhono ngokukhawuleza baqonda ukuphakama kwabo. Ngenxa yoko, baba yienkokheli okanye baphinde bagxeke bonke abakuzungezile.
Ukuba ngumkhokeli ocacileyo, umntwana ngokukhawuleza uba yintlalo. Uziva uxanduva lwakhe kwabanye kwaye uzama ukudlala nabanye abantwana abaninzi. Ngamanye amaxesha kwesi sizathu iqela labantwana lijika libe yindawo ehlukeneyo. Umzekelo, umntwana onobuchule uthetha ngokugqibeleleyo, ngoko unokutshela ootitshala ukuba yintoni enye umntwana ayifunayo.
Kwakhona kukho iimeko xa abazali, beqonda ngokugqibeleleyo amakhono akhethekileyo omntwana wabo, bamfundisa ngendlela engafanelekanga. Bahlala bemxelela ngokubodwa kokwazi nolwazi lwakhe, bambeka ngaphezu kwabo bonke abanye abantwana. Naliphi na isazi senzululwazi siya kuthi loo mfundiso ayilunganga. Umntwana kufuneka kuqala kuqala abe yinxalenye yoluntu, kwaye emva koko unokuzibonakalisa.
Ngenxa yokukhushulwa, abanye abantwana abanesiphiwo kwi-kindergarten baziphathe kakubi. Basuka kuwo wonke umntu kwaye ngexesha elifanayo benza ngokwabo. Ngokuqinisekileyo abanye abazali badibana nabantwana kwi-kindergarten, bedlala ngokwahlukileyo kubo bonke abantu kwaye abanomdla kwiingxaki nokuziphatha kwendalo.
Abantwana abanikiweyo esikolweni
Abazali abakhuliswayo befunyenwe kwi-nursergart kunye nabazali babonakaliswe ngokupheleleyo kwisikolo. Kakade kwiiklasi eziphambili, ngamnye umntwana uba ngumntu, ngoko wenza izigqibo kwaye ukhetha umgca wokuziphatha. Kule meko, abantwana abanikiweyo bahlakulela ngendlela eyahlukileyo, encike kwimfundo yokuqala. Kodwa phakathi kweklasi nakwizinga eliphezulu yonke into ishintsha kakhulu.
Ubutsha buzisa ubunzima obuhlukahlukeneyo. Zidibaniswe kunye neendawo ezithile zobomi, kodwa ukuba unxibelelwano alukwazanga kakuhle, umntwana onobuchule uphenduka ube ngumntu okhutshiwe. Bonke abanye abantwana bayeka ukunomdla kuye, kuba uzibeka ngaphezu kwazo zonke ezinye. Iimeko ezinjalo ziba yintlungu engqondweni engakwazi ukuguqula ubomi obulandelayo bomntwana. Uyakwazi ukushiya uluntu okanye nokuba ngumntu olwaphulo-mthetho, udelele yonke imithetho kunye namasiko.
Nangona kunjalo, indima yenkokeli ayisoloko ikhangele abantwana abanezipho. Ngokuqhelekileyo kukho iimeko apho umntu onjalo ekhokelela isihlwele, kodwa yiyiphi into ayilungele ukuyenza? Ingxaki enzima ixazululwe kuphela emva kokuqwalaselwa ngokucophelela kwemfundo. Emva koko, ngokwemanani, kwinhloko yoluphi ulwaphulo-mthetho ngumntu onobuqili kwaye onesipho.
Ngako-ke, njani abantwana abanesiphiwo esinokungena kwi-kindergarten kunye nesikolo? Awudingi ukufihla ubuchule bakho, kodwa akusoloko kubakho nxaxheba ekuboniseni. Abazali mabachazele umntwana wabo ukuba le yithuba elongezelelweyo lokuncedisa abantu abazungezile, okuza kubonakalisa ngokuhamba kwesikhathi.
Imidlalo yemidlalo kwi-kindergarten
Yintoni enokunika umntwana esikolweni ukutya kwasekuseni
Ukwahlukana ekulungiseleleni amakhwenkwe namantombazana esikolweni
Iinkampu zezingane e-Ukraine
Indlela yokulungiselela kakuhle umntwana esikolweni
Izabelo zesikolo zehlobo
Ngaba kufanelekile ukunika umntwana kwi-kindergarten?
Ukutolika kwamaphupha: yintoni ingozi
Iingxaki zezempilo zezingane
U-Egor Creed kunye noDmitry Tarasov banikezela umzila weBoze, ividiyo
Ukususwa kweenwele, ukususwa kwenwele ngonaphakade
Indlela yokujongana noxinzelelo lwesikhumba - izidakamizwa zokuxinzelela uxinzelelo
Indlela yokubeka ngokufanelekileyo ikhondom: Uqeqesho
10 Uninzi lwezoKutya
Iintaka zaseparadesi: Izifundo ze-Indian make-up
Isaladi kunye ne-shrimps kunye ne-avocado
Iikhenkethi zaseJamani zeJamani
Iindaba zefeyile ngokwenene: umlomo wesiganeko somtshakazi wakho ngezandla zakho
Indlela yokugubha umgodi kwijee?
Iindawo ezilungileyo kakhulu zokuhlala phesheya